प्रधानमन्त्री भेट्न डा. भट्टराईसहित जसपाका पाँच नेता बालुवाटरमा « Janata Samachar
प्रधानमन्त्री भेट्न डा. भट्टराईसहित जसपाका पाँच नेता बालुवाटरमा
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का पाँच नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् । संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसहित पाँच नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशको राजनीति नयाँ समिकरणको प्रयासमा रहेका बेला जसपाका नेताहरु आफ्नो माग तथा मुद्दा सम्बोधन गराउन र राजनीतिक निकासका लागि संसदको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्न लाग्नुभएको जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी गराउनुभयो ।
बालुवाटार जानु अघि नेता कर्णले बैठकमा जसपाका पाँच नेताहरुको सहभागीता रहने बताउनुभएकाे थियाे । उहाँकाअनुसार संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय परिषदका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, केन्द्रीय नेताहरु राजेन्द्र महतो र अशोक राईको बैठकमा सहभागीता रहेकाे छ।
पछिल्लो समय जसपाका नेताहरुले राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।
पार्टीका नेता तथा सांसद रेशम चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहाई, मधेससँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखरुपमा जसपाले उठाउँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएमा सत्ता सहकार्यका लागि समेत तयार हुने दलले बताउँदै आएको छ ।